तराई–मधेसमा होलीको मौलिकता विस्तारै लोपहुँदै - नेपालबहस
तराई–मधेसमा होलीको मौलिकता विस्तारै लोपहुँदै
| १६:०४:०७ मा प्रकाशित
२६ फागुन सर्लाही । पछिल्लो सयम आधुनिकताको नाममा तराई–मधेसमा मनाइने होली पर्वको मौलिकता हराउँदै गएको छ । हरेक वर्ष फाल्गुन शुक्लपूर्णिमा तिथि अर्थात होली पूर्णिमाको दिन मनाइने होलीमा गाइने होरी तथा जोगिरा जस्ता गीत विस्तारै लोपहुँदै गएका छन् । यसको स्थान अश्लिल भोजपुरी तथा मैथिली गीतहरुले लिन थालेको छ ।
पहिले होली आउन केही दिन बाँकी हुँदा नै तराई–मधेसका गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा सामूहिक रुपमा होरी र जोगिरा गाउने गरिन्थ्यो । स्थानीयवासी दिनभरको सारा काम सकाएर साँझ चौक, चौतारामा जम्मा भई सामूहिकरुपमा होरी र जोगिरा गाउने गरिन्थ्यो । तर आजभोली मानिसहरु त्यो चलन विस्तारै बिर्सदैँ गएका छन् ।
“आजभोलि गाउँदेखि शहरसम्म विभिन्न सङ्घसंस्था, सङ्गठन तथा सरकारी कार्यालयमा एकसाता अगाडिदेखिनै होलीको नाममा होली मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरेर सामूहिक रुपमा एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ”, चक्रघट्टा गाउँपालिका औरहीका राजगिर यादवले भने । “अहिले जे जस्तो कार्यक्रम गरेर होली मनाए पनि होलीको मौलिकता भने हराउँदै गएको छ । विगतमा होलीमा गाइने परम्परागत होरी र जोगिरा सररर जस्ता गीतहरु अहिले सुन्न पाइन छोडिएको छ”, यादवले भने ।
उनले भने, “आधुनिकताका नाममा आएका होली मिलनजस्ता कार्यक्रममा एकआपसमा रङ्ग अबीर दलेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नको लागि मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ।” यस्ता कार्यक्रम सामजिक सद्भाव बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा केवल शुभकामना आदानप्रदान गर्नमै सीमित भएको मलङ्गवा जेसिजका पूर्वअध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता सुवोध राजोपाध्यायले बताए । होलीका परम्परागत गीत जोगिरा सररर जस्ता गीत बज्न छोडेको उनको भनाइ छ । शुभकामना आदानप्रदान मात्र नभइ तराई–मधेशमा गाउने गरिएका मौलिक जोगिराका गीतको पनि संरक्षणतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको राजोपाध्यायले बताए । केहीवर्ष अगाडिसम्म सर्लाहीका गाउँ गाउँ र टोल टोलमा जोगिरा सररर गीत गाएर मानिसहरुले होली मनाउँथे । अहिले भने होली मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरेर यसलाई परम्परागत होलीलाई रेडिमेड होली बनाइदिएका छन् ।
पहिले होलीमा हल्का रङ्ग र अबीर मात्र खेलिन्थ्यो । अहिलेको होली मोबिल, कालो रङ्ग, हिलो र पानीको होलीमा परिणत भएको छ । साँझ परेपछि परम्परागत होरी र जोगिरा गाइन्थ्यो । अहिलेको होलीमा साँझ परेपछि रक्सी पिउनेले समाजमा विकृति ल्याएका छन् । आजभोलिका होली गीतमा अपाच्य शब्द प्रयोग हुने गरेका छन् । अहिले डिजेमा अश्लिल र अपाच्य भोजपुरी गीत बज्ने गरेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो परम्परागत होली लोप हुँदै गइरहेको छ ।
हराउँदै परम्परागत होरी गीत
तीन दशक अघिसम्म होली आउनु अघिदेखि नै गाउँगाउँमा मानिसहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर होरी, जोगिरा जस्ता गीतहरु गाउने चलन रहेको थियो । अहिले त त्यस्ता गीत गाउन त परै जाओस् सुन्न पनि छोडिएको अभियन्ता सुवोध राजोपाध्यायले बताए।
“पहिले होली आउनुपूर्व नै, राम खेले होली लक्ष्मण खेले होली, आ लंकामे रावण खेले होली जस्ता गीतहरु गाउँगाउँमा गुञ्जिन्थे”, उनले भने, “तर आजभोलिका होली गीतमा अपाच्य शब्दहरु प्रयोग हुने गरेका छन् । डिजे बजाएर हाम्रा परम्परागत होली गीत लोप हुँदै गइरहेका छन् ।”
स्थानीय बुढापाकाहरु पहिले होलीको समयमा भाङ खाने गरेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार आजभोलि भाङको सट्टा खाने गरिएको रक्सीले समाजमा विकृति फैलिएको छ । पहिले साँझ परेपछि परम्परागत होरी र जोगिरा गाइन्थ्यो । अहिलेको होलीमा साँझ परेपछि रक्सी पिउनेहरुले समाजमा विकृति ल्याएको उनको गुनासो छ ।
नेपाल लाइफको ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक ४ मिनेट पहिले
स्वयंसेविकाले जोखिम भत्ता पाएनन् अझै २९ मिनेट पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ ३८ मिनेट पहिले
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र ४२ मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? ४७ मिनेट पहिले
अक्सिजन आपूर्ति सहजीकरणका लागि मोबाइल हटलाइन नम्बर २३ घण्टा पहिले
ओलीले दिए पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता २४ घण्टा पहिले
सरकारको ध्यान अब संक्रमितको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित: पोखरेल १८ घण्टा पहिले
गण्डकी प्रदेशलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १ हप्ता पहिले
अस्पतालको बरण्डामा बस्ने कि पेटीमा ? २ दिन पहिले
शंकर पुन: मुख्यमन्त्री भए लगत्तै चार सांसदले दिए राजीनामा २ हप्ता पहिले
आज र भोलि हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना ४ हप्ता पहिले
ग्लोबल आइएमई र स्पर्स लघुवित्तको एकीकृत कारोबार वैशाख ८ गतेदेखि सुरु ४ हप्ता पहिले
कोरोना नियन्त्रणको खर्च प्रदेश सरकारले गर्ने २ हप्ता पहिले
केन्याका राष्ट्रपति दम्पत्तिले लगाए कोरोनाको खोप २ महिना पहिले
शिक्षामन्त्री पोखरेलको आक्रोश : शिक्षा प्रणाली गलत, शिक्षकहरु असक्षम ! २ वर्ष पहिले
तराईमा हुस्सु र कुहिरो १ वर्ष पहिले
टीकापुरमा सेनिटरी प्याड खरीद गर्न रु ५२ लाख बजेट ११ महिना पहिले